प्रचण्डले दिए ओलीलाई चेतावनी। - खबरदार न्युज
May 27, 2021 May 27, 2021 AdministerLeaveaComment on प्रचण्डले दिए ओलीलाई चेतावनी।
एमालेसँग पार्टी एकता गरियो, असल नियतका साथ कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणका लागि गरिएको थियो । तर केपी ओली प्रवृतिसँग जुध्नुपर्ने भयो । ओलीले सवै भताभुंग पार्ने काम गरे । माधवजी र हामीहरु मिलेर लडिरहेका थियौं ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा असम्वैधानिक ढंगले विघटन गरे, हामीले लड्यौं । सर्वाेच्चले पूर्नस्थापना गरयो । फेरि सर्वाेच्चले अर्काे फैसल्ला गरयो । त्यसले एमाले र माओवादी छुटााईदिने गरेर विल्कुल राजनीतिक निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको त्यस्तो राजनीतिक निर्णयको प्रतिवाद कसरी गर्ने ? हामी छलफलमा थियौं । हाम्रै संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका बरिष्ठ नेता देखि कानुन ब्यवसायीसँग कुराकानी गरेका थियौं । यो राजनीतिक निर्णय भयो, अदालतको ।
यस्तोमा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने कुरा भयो । वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा देखि सवैले राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । ‘तपाईहरु ढुढतापूर्वक एकतावद्ध भएर जानुभयो भने लडाई जितिन्छ’ शम्भुजीले भन्नुभएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ताहरुलाई विदाई गरेपछि ।
माधव, झलनाथ, नारायाणकाजी लगायतका हामी सचिवालय का साथीहरु त्यही छलफलमा बस्यौं । अव के गर्ने ? तुरुन्तै बाहिर प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्नेमा स्थायी कमिटिको बैठक बस्यौं, त्यहाँ अध्याधिक वहुमत छ ।
जहासकुै केपीलाई परास्त गरेकै थियौं । भोलि ११ बजे स्थायी समितिको बैठक बस्यौं, त्यहाँ छलफल गरेर ब्यवस्थित ढंगले एउटा प्रस्ताव पारित गरौं, वक्तब्य दिऔं, र जनताका वीचमा जाऔं भन्ने भयो ।